Ukuhamba ngololiwe okuyingozi ngabakhenkethi- Ngaba likho ithuba?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » Ukuhamba ngololiwe okuyingozi ngabakhenkethi- Ngaba likho ithuba?
Ukhenketho lokuzonwabisa • Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zase China eziQhekezayo • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseRwanda eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-CN Tower EdgeWalk -Imifanekiso ngoncedo lwecntower.ca
Imithombo yeendaba kwezentlalo, kunye neminye imithombo yeendaba eqhelekileyo yayi-buzz ngaphambi kwengxaki ye-COVID, xa eminye imifanekiso yesibini esincinci sabakhenkethi yabonakala ixhonywe kuloliwe welizwe laseSri Lank ekuyekeni kwabantu abathandana besisini esinye, bewonwabele umzuzu onomdla.
Kwakukho iingxoxo ezishushu malunga nale ndlela yokunyusa iSri Lanka, nabantu abaninzi bethetha ngobungozi bento enjalo.
Kwakukho inkxalabo yokuba iza kuzisa iindaba ezimbi eSri Lanka ukuba kunokwenzeka into eyingozi.
Eli candelo lohambo ngololiwe kwindlela ephezulu yelizwe ngokuqinisekileyo yenye yezona ndlela zibalaseleyo zoololiwe emhlabeni.
Kwaye kulungile ke ngoko ndiyaqikelela. Mna ndingomnye owaye wajoyina i-chorus eyathetha ngokungqongqo ngokuchasene nale nto.
Nangona kunjalo ndicinga ngaphandle kwebhokisi, ndiye ndacinga- Ngaba singadala ithuba apha?
Amava amatsha kunye nokhenketho olufuna umdla namhlanje
Akukho mathandabuzo ukuba kukho icandelo elitsha lokuqonda, elincinci, amava kunye ukufuna ukhenketho kubakhenkethi, ukuvela kunye nokuhamba kwihlabathi liphela. Baziintanethi kakhulu kunye nabasasazi ngokwasentlalweni, abafuna amava amnandi nangakumbi, kwaye bahlala bekhumbula indalo. Bahlala bebonwa behlola iiholide zeengoma, ezicwangcisiweyo ngokukodwa ngokweemfuno zabo kunye neemfuno zabo.
Ukutyhubela iminyaka, uluntu belusoloko lutyhala imida yokuhlola: siwoyisile umhlaba, ulwandle kunye nendawo. Sifumene izinto ezininzi ezimangalisayo ukuza kuthi ga ngoku kwiplanethi yethu ngokunxanelwa ulwazi olungapheliyo.
Abakhenkethi abafani. Ukubaleka kubomi bemihla ngemihla obuxinzelelekileyo, bafuna into eyahlukileyo, bade baye nakwiindawo ezinobutshaba okanye eziyingozi ukuze bafumane uvuyo lokufumanisa kunye nemvakalelo yolonwabo. Alisekho igumbi lehotele elicocekileyo elinoluhlu lwezixhobo, ukutya okumnandi, kunye nelanga elaneleyo kubakhenkethi.
Ngokutsho kokubhukisha.com, ukulangazelela amava ngaphezulu kwezinto eziphathekayo kuyaqhubeka ukuqhuba umnqweno wabahambi wokuhamba ngendlela engakholekiyo nangalibalekiyo: iipesenti ezingama-45 zabahambi banoluhlu lwamabhakethi engqondweni. Eyona nto inokubonakala kuluhlu lwamabhakethi ngabantu abafuna ukonwaba abafuna ukutyelela ipaki yomxholo owaziwayo kwihlabathi liphela, abahambi abafuna ukuya kuhambo lukaloliwe oludumileyo, okanye ukutyelela indawo ekude okanye enzima.
Ithiyori yokunciphisa idrive kwizifundo zengqondo ibeka ukuba umntu akaze abe kwimeko yokuzaliseka ngokupheleleyo, kwaye ngenxa yoko, kuhlala kukho iimoto ezifuna ukoneliseka. Abantu nezinye izilwanyana ngokuzithandela bonyusa uxinzelelo ngokujonga imeko yabo engaziwayo, ukuzenzela uxinzelelo kunye nokushiya imimandla yabo yokuthuthuzela. Oku kubanika uluvo lokuphumelela kunye nolwaneliseko.
Yiyo loo nto ukonwaba okungaziwayo, ihambo kunye nokukhawuleza kwe-adrenaline kutsala abahambi.
Yintoni eyenziwe ngamanye amazwe?
Njengoko sele kukhankanyiwe, amazwe amaninzi ahlakulela amava awodwa, angalibalekiyo, kunye namava achulumancisayo kwimveliso yazo. Zimbalwa zichazwe apha ngezantsi.
Hamba ngeSydney Harbour Bridge
Amaqela amancinci athathwa ekuhambeni ecaleni kwentsimbi enkulu, eyakhiwe ngentsimbi eyakhiwe eyakhelwe iSydney Harbour Bridge. Idrama engummangaliso eyi-360. ukujonga ukusuka kwibhulorho, iimitha ezili-135 ngaphezulu komhlaba, izibuko, kunye nendlu ekufutshane yaseSydney Opera, ngelixa ukubhencwa ngokupheleleyo zizinto ngenene ngamava anqabileyo kwaye achulumancisayo.
I-Coiling Dragon Cliff skywalk, Zhangjiajie, China
Kumantla mpuma kwiphondo lase China iHunan, iindwendwe zinokuthatha uhambo ngokuzolileyo ecaleni kwendlela enamathele kwiTianmen Mountain-4,700 iinyawo ngaphezulu komhlaba.
Indawo yokuhamba emazantsi eglasi ingaphezulu kweenyawo ezingama-300 kwaye ziimitha ezintlanu ububanzi, inika amava ekuthiwa ayonwabisa kwaye ayoyikisa.
I-CN tower EdgeWalk, eCanada
Umtsalane omde eToronto uvumela abantu ukuba beme kanye emaphethelweni e-CN Tower kwaye bayame. Sesona sangqa sipheleleyo kwihlabathi liphela, ukuhamba ngaphandle kwezandla kwi-1.5 yemitha ububanzi ejikeleze umphezulu wenqaba ephambili yeNqaba, iimitha ezingama-356, amabali ali-116 ngaphezulu komhlaba. Kwi-EdgeWalk ngamava eTyikityo yaseCanada kunye namava oTyikityo lwaseOntario.
IGorilla Safaris eRwanda
Iindidi zamathuba ahlukileyo okuhamba eRwanda naseUganda akuvumela ukuba ungene ehlathini ukuze ujonge emehlweni eeGorila kwindawo yazo yendalo. Ngamava ohambo olwahluke kwaphela lwaseAfrika. Lo mzuzu ushiya umbono ongapheliyo kwaye ongalibalekiyo usondela kufutshane nesi silwanyana sikhulu.
Ezi zimbalwa. Ke sele kukho uluhlu lokhetho olukhethekileyo, olubakhenkethi olonwabisayo kubakhenkethi kwihlabathi liphela.
Ukhuseleko-imeko enye egqithileyo
Zonke ezi zinto zifuna umdla kwaye zibonakala ziyingozi kubakhenkethi zinendawo enye engafaniyo neyakha yaphazamiseka - ukhuseleko.
Ukhuseleko lubaluleke kakhulu kuyo yonke le misebenzi kwaye luxhomekeke kwitshekhi engqongqo kwaye iphononongwe rhoqo. Bonke abasebenzi abakhokela kwaye bafundise aba bakhenkethi bafuna ukuzonwabisa baqeqeshwe kakuhle kwaye baqeqeshwe.
Nasiphi na isixhobo esisetyenziselwa ukhuseleko esifana neentambo zokubopha kunye neebhanti zokhuseleko ziyilelwe kwimigangatho ephezulu kwaye kuvavanywa amaxesha ngamaxesha. Akukho nto ishiyelwe kumabona-ndenzile kwaye ukuba kukho ukubonakala okuncinanana komngcipheko ngenxa yeemeko ezingalindelekanga zokusingqongileyo, umtsalane uvaliwe okwexeshana. (umzekelo, xa kukho umoya onamandla, ukuhamba kwebhulorho yaseSydney Harbor kunqunyanyisiwe).
Amanyathelo okhuseleko anjalo ayimfuneko, kuba nayiphi na ingozi engalindelwanga inokukhokelela kwiziphumo ezibi kunye nezothusayo zokumangalela kunye nokuvala umtsalane.
Ke kuthekani ngokukhwela uloliwe?
Umtsalane wendlela yokuhamba ngololiwe yaseSri Lankan (amaxesha amaninzi phakathi kukaNanu Oya no-Ella- elona candelo libukekayo) kukuba umkhenkethi unokuma kwibhodi yonyawo lomnyango ovulekileyo woololiwe kwaye eve impepho epholileyo ebusweni babo ngelixa utsala ilizwe elihle leentaba kunye namasimi eti. Le yinto uninzi lwabakhenkethi basentshona alunakuyenza ekhaya, apho zonke iingcango zikaloliwe zokuhamba zivalwa ngokuzenzekelayo xa uloliwe eqala ukuhamba.
Ngapha koko ndixelelwa ukuba ezinye iiarhente zabakhenkethi e-Australia bacelwa ngokukhethekileyo ngabakhenkethi ukuba babalungiselele la mava, xa bebhukisha ukhenketho lwabo.
Ke kutheni ungoyili kwaye wenze umtsalane ofanelekileyo koku?
Ngaba asinakho ukuguqula inqwelwana enye ukuba ibhalkhoni evulekileyo ecaleni apho umntu anokuma ngaphandle kwaye eve indawo evulekileyo? Inokufakwa iileyili ezifanelekileyo zokhuseleko kwaye umntu ngamnye angabanjiswa kwinqwelwana ngentambo yokubopha (njengaleyo isetyenziswa kwezinye izinto ezinomtsalane apho unxibelelwano luvulelekile kwizinto). Kusenokuhlawuliswa intlawulo eyodwa kula mava.
Inye into ethanda imeko yokhuseleko kukuba ngexesha lokunqumla kule ndawo, ngenxa yokuthambeka, uloliwe uhamba ngesantya senkumba, ngokungafaniyo nakwamanye amazwe apho isantya sinokufikelela kwi-80-100 yeekhilomitha ngeyure.
Oku kutsala kunokusetyenziswa njengomvelisi wengeniso weSebe lezoLoliwe njengoko abakhenkethi abafuna ukufumana olu lonwabo banokuhlawuliswa umrhumo, kangangexesha elithile abanokulisebenzisa ngalo.
Nangona oku kunokubonakala kulula, enyanisweni kunokubakho imicimbi emininzi yokufuna ukujongana nemicimbi ekufuneka ijongiwe.
Kodwa ukuba kukho umyolelo, kwaye amasebe ahlukeneyo abandakanyekayo angalibona lonke ithuba, aze afike kubude obufanayo, ukunciphisa ubugqwetha obuqhelekileyo obuhlala buqhubeka, ngokuqinisekileyo ngekhe kube nzima kwaphela.
Eyona nto siyithethayo kulo mthetho wonke, kukuba kufuneka sicinge ngaphandle kwebhokisi kwaye siqonde kuwo onke amathuba akhoyo, ngakumbi njengoko ngokuthe ngcembe sibavulela abakhenkethi emva kobhubhane. Sikuqhelile ukurhabaxa kwaye sihlasela malunga nokusilela okukhoyo. Kodwa kuninzi kakhulu okunokwenziwa ukuba kukho abantu abambalwa abanomdla nabazinikeleyo abanokuhlangana.
Ukhenketho emva kwayo yonke into lubonisa amashishini kwaye ngaphandle kokuyila, i-panache, abalingisi, kunye nokubonisa, yintoni ebonisa ishishini?